Guddiga Hawlaha Dadweynaha Washington wuxuu sannadka cusub ku bilaabayaa Guddoomiye cusub - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Golaha Hawlaha Dadweynaha Washington wuxuu sanadka cusub ku bilaabayaa Guddoomiye cusub
Golaha Hawlaha Dadweynaha Washington wuxuu sanadka cusub ku bilaabayaa Guddoomiye cusub
Scott Hutsell ayaa hoos u degay, Kathryn Gardow ayaa soo galay
OLYMPIA, Wash - Badalida ilaalada ayaa dhacday Janaayo 4, 2021 Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka Washington markii Guddoomiyaha Lincoln County Scott Hutsell uu ka degay Guddoomiyenimada Golaha. Wakiilka Hutsell wuxuu ku biiray guddiga isagoo ah Wakiilka Deegaanka ee la Doortay sanadkii 2012 waxaana u magacaabay Gudoomiye Gov. Jay Inslee sanadkii 2017, xiligaas oo ahmiyadaha mudnaanta u leh gobolka ay ka wareejiyeen maal gelintii loo qoondeeyay Golaha Hawlaha Guud, taasoo mustaqbalkeeda aan la hubin.
Iyadoo loo marayo hoggaanka Hutsell, go'aan qaadashada iyo qallafsanaanta, guddigu wuxuu ku sugan yahay meel aad uga wanaagsan sidii ay ahayd sideed sano ka hor. Gudoomiyuhu wuxuu soo jeediyay $ 160 milyan doolar oo miisaaniyadeedkiiba laba jeer ah oo loogu talagalay Barnaamijyada Dhaqanka ee Gudiga Hawlaha Guud iyo $ 45 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo loogu talagalay Barnaamijka Hawlaha Guud ee Hawlaha Guud.
Hutsell wuxuu yiri: “Tani waa maalin qadhaadh aniga, in kasta oo halganka loogu jiro dib-u-soo-celinta dakhliga u gaarka ah Guddiga Hawlaha Guud, weli waxaan aaminsanahay in kaabayaasha guud ee bulshada loo aqoonsaday mar kale inay yihiin laf-dhabarta soo kabashada dhaqaalaha iyo koritaanka joogtada ah. Miisaaniyadda uu soo bandhigay Badhasaabka ayaa ah waxaan rajaynayaa inay noqoto midda ugu horreysa ee guulo badan oo ay gaadhaan guddiga iyo gobolka sannadaha soo socda.
Gudoomiyuhu wuxuu magacaabay Kathryn Gardow, PE, Gudoomiyaha Golaha, taas oo calaamad u ah soo laabashada Gardow oo ka shaqaysay guddiga 2005 ilaa 2014, oo ay kujirto shan sano gudoomiye kuxigeen. Gardow wuxuu shaqada u keenayaa ku dhowaad 40 sano oo khibrad ah oo ku saabsan isticmaalka dhulka iyo injineernimada madaniga ah. Waxay sidoo kale hadda u adeegtaa xubin guddi ah Guddiga Maalgelinta Ilaalinta Madadaalada, guddiga dejinta siyaasadda ee Xafiiska Ilaalinta Madadaalada.
Gardow wuxuu yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto ka shaqeynta Guddiga Howlaha Guud, maadaama aan ogahay sida wanaagsan ee shaqada gudigu u qabtaan dadka ku nool Gobolka Washington. Waxaan ku dhiiraday inaan sii wado talaabooyinka wanaagsan ee la qaaday si loo soo celiyo kaalintii gudiga oo ahayd maalgelin joogto ah iyo ilo caawinaad farsamo oo loogu talagalay bulshada deegaanka. Joogtaynta iyo casriyaynta nidaamyada kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo kaqaybgal firfircoon oo isdabajoog ah oo ay kaheleyso Gudiga Howlaha Guud waa mid muhiim u ah ka caawinta gobolka inay gaarto hadafkeeda caafimaadka bulshada, deegaanka, sinaanta iyo dhaqaalaha
"Aniga oo ku hadlaya magaca dhammaan xubnaha kooxda ganacsiga ee la soo shaqeeyey Scott muddadii uu ka mid ahaa guddiga, waxaan ku ammaaneynaa sida hagar la'aanta ah ee ay uga go'an tahay in ay dhiirrigeliso maalgashiyada kaabayaasha bulshada ee muhiimka ah ee xoojiya bulshooyinka gobolka oo dhan," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. “Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno xiriirka aan la leenahay Guddoonka Sare ee Guddoonka Guddoonka iyadoo aan ka wada shaqeyno dadaallada muhiimka ah oo ay ka mid tahay ballaarinta ballaadhinta oo isku xireysa dad badan oo leh fursado cusub oo telemedicine ah, barashada fog iyo horumarinta dhaqaalaha iyada oo loo marayo marin ballaaran oo la heli karo, internet xawaare sare leh. ”
Booqo Guddiga Howlaha Guud bogga wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan guddiga iyo barnaamijyadiisa.
← Wakhtiga Jan. 29: Tamarta Qoryaha ee Xarumaha Dadweynaha Wakaaladaha gobolku waxay qaataan xeerar lagu hirgaliyo 100% sharciga korantada nadiifka ah ee Washington →